June 2019 – siifsiin
Yuunivarsiitii kessaa Yeroo waliin turre Waan gaggaarii malee Waan biraa hinagarre. Akka haadhaataatee Ofitti naqabatte; Akka jaalalleettis Na kunuunsifatte. Sirra boraafadhee Dadhabbii boqodhe; Jaalala irreefadhee Nagaa facaafadhe; Dheebodhee unadheeBeela’ee sooradhe; Abjuu dhugeeffadhee Dhugaa dhamdhamadhe. KitaabaKutaa : 12 irraakan fudhame